Xaflada Sanadguuradii 14aad ee Puntland oo ka dhacday Pakistan [Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Communities / Xaflada Sanadguuradii 14aad ee Puntland oo ka dhacday Pakistan [Sawiro]
Xaflada Sanadguuradii 14aad ee Puntland oo ka dhacday Pakistan [Sawiro]
August 25, 2012 - By: Khalid Yusuf
Xalay oo taariikhdu ahayd 23\_8\_2012 waxaa kadhacday dalka Pakistan gaar ahaan caasimadda Islamabad, xaflad si’heer sare ah loosoo agaasimay laguna maamuusayey Sanadguradii 14aad ee asaaskii dowlada Puntland ee Soomaaliyeed . Waxaa xafladaas sooqaban qaabiyey jaaliyadda reer Puntland ee dalka Pakistan.
Waxaa ka sooqeybgalay bulsha weynta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Pakistan, waxaana kamid ahaa martidii ka sooqeybgashay , Ambassador Cali Sheikh Abdullahi iyo Gudoomiye Abdikariim ( Yoogo ) , Eng Suubane, Caaqil Xuseen Cabdi, Ganacsade Siciid Mahdi, Gudoomiyaha Jaalliyadda Soomaaliyeed ee Pakistan Mudane Ahmed Mukhataar ( Qalbi).
Waxaa Xaflada daadihinaayey Abdullaahi Abdirashiid , waxaana lagu furay aayadaha quraanka kariim ka ah oo uu akhriyay Ahmed Osman Salad , intaa kadib waxaa lagu soo dhoweeyey Shiikh Abdulqaadir Siciid oo kalmada furitaanka xaflada jeediyay isagoo ku hadlayey magaca gudiga qabanqaabada xaflada.
Kadib waxaa lagu soodhowayey hadalka Ambassador Cali Sheikh Abdullahi oo kahadlay muhiimada ay leedahay isku xirnaanta iyo sida Puntland ay ugu tahay astaan nabadeed bulsha weynta Soomaliyeed. Safiirku waxaa uu dhamaan dadka xaflada kasooqeybgalay ku booriyey inay iskaashadaan oo danta guud kashaqeeyaaan,waxa kaloo uu ka hadlay xaalada Soomaaliya iyo sida ay maanta ugu baahan tahay dhalinyaro wax bartay oo dalka samatabixiya.
Waxaa isaguna xaflada kahadlay Abdulqaadir Amiir Mohamud (Xuuxsade) oo soojeediyey barnaamij ku saabsan taariikhda Puntland iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soomartay. Waxaa kaloo ku hadlay magaca Aqoonyahaniinta reer Puntland Mohamuud Aadan Sanweyne .
Marti kala duwan ayaa iyaguna meesha ka hadlay sida: Eng Suubaane , Gudoomiye Abdikarim (Yoogo) iyo Eng Mahamed Baashi (Talaabacade ) oo ku hadlay Afka Jaalliyada Puntland ee Magaalada Karachi. Waxaa isaguna hadal qiimo badan kasoojeediyey xaflada Eng Ahmed Siciid Jibriil oo ku hadlay afka Jaalliyada reer Puntland ee Magaaladda Lahore.
Markaas kadib waxaa si’wadajir ah usoojeediyey Barnaamij su’aalo iyo jawaabo ah , Abdullahi Mohamed ( Axbaab ) iyo Ahmed Maxamuud ( Heeraab) .
Kooxda Wadajir oo uu hormuud ka ahaa Abwaan Kuluu ayaa riwaayad aad u qiimo badan kusoo bandhigay xaflada oo dhamaan ay la maqsuudeen dadkii kasoo qaybgalay xaflada. Riwaayadaas oo ka hadlaysey fa’iidada iskaashiga iyo wadajirku bulshada u leeyahay.
Gabagabadii waxaa lagudoonsiiyey Shaahado sharaf dhalinyaradii soo abaabushay ee kaalinta libaax ka qaadatay qabsoomida xaflada. Ugu danbayntii waxaa xaflada soo gunaanadey Jaamac Mohamed Saleeban oo ahaa agaasimaha guud ee xaflada una mahadceliyey dhammaan dadkii kasooqeybgalay xaflada.
Abdulqaadir Xaaji Siciid